Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka G/banaadir oo soo kormeeray qeybo ka mid ah dagmooyinka gobolka – idalenews.com
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasada iyo arrimaha bulshada ahne ku simaha guddoomiyaha gobolka Banaadir Cali Axmed Guure iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ayaa maanta kormeer ku tagay qeybo ka mid ah dagmada Hodan halkaas oo ay ka socoto howllo ku aadan hormarinta iyo duminta dhismayaasha sharcidarada ah.
Cali Axmed Guure ayaa waxaa kormeerkiisa ku wehliyay afhayeenka gobolka, guddoomiyaha dagmada iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta gobolka Banaadir, waxaana saxaafadda la hadlay guddoomiyaha dagmada Hodan Cabdi Maxamed Dhabaney waxa uuna sheegay in maamulka dagmada ay in muddo ah ku howlanayeen sidii ay u burburin lahayeen dhismayaasha sharcidada ah ayna haatan ku guuleysteen.
Sidoo kale guddoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cali Axmed Guure ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in shacabka ay ku qanacsanadaan in la dumiyo dhismayaasha sharcidarada ah oo ay ku ganacsan jireen.
Dhanka kale guddoomiyaha xiriirka dagmooyinka Gobolka Banaadir oo ay wehliyeen wafdi ka socday hay’adda UN-habitat oo ah hay’ad dhismo ka wado dagmooyinka Gobolka Banaadir ayaa soo indha indheeyay halka ay marayaan dib u dhiska.
Agaasimaha xiriirka dagmooyinka G/banaadir Mukhtaar Maxamed Dhagacade ayaa sheegay in u jeedka kormeerkoodu uu ahaa halka ay mareyso dhismaha ay wado hay’adda UN-habitat.
Sidoo kale mas’uul ka socday hay’adda dhismaha ka wado magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa uga mahad celiyay maamulka Gobolka Banaadir sida wanaagsan oo ay gacanta uga siyeen dhismaha ka socdo qeybo ka mid ah dagmooyinka gobolka.
Golaha Ammaanka iyo Midowga Yurub oo ka wada hadlay Hawlaha Nabad ilaalinta Somalia